Dunida Jurassic, waqti kasta oo la soo dhaafay ayaa ka fiicnaa | Wararka IPhone
Jurassic World, waqti kasta oo la soo dhaafay ayaa ka fiicnaa
Miguel Hernández | | Wararka IPhone, Waqtiyada firaaqada
Aniga dhankeyga, daahfurka qeybta "firaaqada" ee degelkeena, halkaas oo aan kugula talin doono filimada shalay iyo maanta, waan iska dhaafi waayey xanuunka baaxada leh ee igu dhacay ee ah inaan tago shaneemada oo aan arko Jurassic World. Kuwa ugu xiisaha badan sagaashanada, kuwa naga mid ah ee sameeyay maratoonnada Jurassic Park ee saxda ah, waxaan qaniinay cidiyahayaga oo sugaya 12-ka Juun inay soo gaarto si aad ugu qulqulatid tiyaatarada filimka kuugu dhow iyadoo ujeedadu tahay inaad marqaati mar labaad ka noqoto taariikh cabsi la'aan ah dinosaurs, DNA, velociraptors iyo adrenaline. Si kastaba ha noqotee, dahab maahan wax kasta oo dhalaalaya.
Jaleeco, adoo tixgelinaya inaad aasaastay mid cusub rikoodhka dakhliga taariikhiga ah ee $ 511,8 milyan adduunka oo dhan dhammaadkiisa usbuucaIyada oo ku dhowaad kala bar ay joogaan Mareykanka, qof walba wuxuu u maleynayaa inaan wajaheyno shaqo heer sare ah, laakiin dabcan, isla dhagaystayaashu ma tagayaan shineemo sidii hore, mana ahan isku qiimo. Marka la soo koobo, waxaan u ogolaanayaa nafteyda inaan ku fasaxo Daniel De Partearrollo, tifaftiraha Cinemanía, markuu tilmaamayo taas filimku wuxuu qaataa dhowr qaniinyo sax ah, laakiin wax raad ah kama tago.
Waxaan ku bilaabi doonnaa Bryce Dallas oo door ka ciyaara inta udhaxeysa qosolka iyo majaajillada, ku dhowaad gebi ahaanba muujinta, kana fog waxa Laura Dern na siisay ee Jurassic Park iyo meel aad uga fog Julianne Moore Adduunkii Khasaaray. Marka la soo koobo, waa wax aan macquul aheyn in la iloobo in filimka oo dhan lagu bixiyay cirib., oo jilaya tartamo u qalma Usain Bolt oo ugu xun, oo hoos u dhigaya doorka Chris Pratt, taas oo ah tan ugu ammaanta badan filimka. Jilaaga asaliga ah ee reer Virginia wuxuu ku sugnaa joogga Sam Neill laftiisa, ama ugu yaraan ugu yaraan, laakiin iska ilaalinta isbarbardhiga waa wax aan macquul aheyn.
Faanka ku saabsan saameynta gaarka ah wuxuu ka dhigayaa dinosaurs (taas oo jidka ag fadhida, ama aan wasakheynin, ama aan dhiig bixin) ay umuuqdaan kuwa cayaaro muuqaal ah oo fiidiyoow ah marka loo eego filimka, daabacaddana waxay go'aansadeen inay doortaan a siyaado ah saamaynta gaarka ah ee dhijitaalka ah, adigoon ka faa'iideysan xaqiiqada animatronics-ka gebi ahaanba, taas oo aan shaki ku jirin in ay ku guuleysato saameyn macquul ah sida dinosaurs-ka farsamada ee qaybo ka mid ah Spielberg ku soo qaatay noocyadiisii ​​hore, laakiin wixii ka sarreeya dhammaan mugdiga ciyaarta ee nalalka nuqullada ugu horreeya ayaa gebi ahaanba la ilaaway, oo leh sawir ka tagaya waxyaabo badan oo la doonayo iyo qaar ka mid ah noocyada cajiibka ah, ee muuqaallada ugu dambeeya ku burburaya laxanka waxa ay yihiin, papier-mâché saafi ah.
In kasta oo aan la inkiri karin in filimku madadaalo yahay, haddana taariikhda ugama gali doono u adeegidda maamuus kuwii ka horreeyay (gaar ahaan kii koowaad iyo kii labaad), laakiin dabcan, Waa halkan halka aan ku ogaanay in agaasimaha uu yahay Colin Trevorrow oo uusan aheyn Spielberg, iyo in ka badan xilligii filimka ganacsigu marayo meeshii ugu fiicnayd, waxaan dhihi karnaa qoraalka Jurassic World inuu aad uga xun yahay nasiib-darrada, kana baxsan midowga aadanaha-dinosaur iyo qoraalo gaar ah oo kaftan ah oo ku xayiran kabaha kabaha. Xaqiiqdii waa filim in la arko, lagu raaxeysto, laakiin aan la udgoon. Si kastaba ha noqotee, way sii socotaa inay u oggolaato daabacaadda saddexaad ee Jurassic Park inay haysato sharaf sharaf leh oo ah inay tahay tii ugu xumayd. Kaysar baa leh wixii Kaysar leeyahay, ixtiraamida heesta asalka ah iyo isticmaalkeeda daqiiqado gaar ah ayaa ugu fiicneyd filimka.
By the way, anigu ma dhihi karo macsalaameyn aniga oo aanan sacab sacab u siinin soo saaraha bateriga ee Jurassic Park Jeep ee ku haray Jurassic World iyo in wiilasha ay bilaabaan sanado badan kadib. Waa inay shaqaaleeyaan Tesla Motors. Xusuusnowna in dhamaadka maqaal kasta aan ku qiimeyn doono filimka, sida ugu macquulsan uguna macquulsan laakiin aan xasuusto inaan ka hadlo aragtidayda. Ha ka waaban inaad ka tagto faallooyinka filim kasta oo aad rabto inaad ku talisid ama aad rabto inaad wax ka ogaato, ha noqoto mid caadi ah ama mid ugub ah, si aan u falanqeyno. Adiguna, maxaad u malayn Jurassic World?
Xusuusin tifaftiraha: 5.5 / 10
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » Waqtiyada firaaqada » Jurassic World, waqti kasta oo la soo dhaafay ayaa ka fiicnaa
Ma ihi haba yaraatee. Waxay ila tahay aniga inaan ka sareeyo 2 iyo gaar ahaan 3. Spielberg's 2 waxay ahayd laakiin ma iloobi karno muuqaalo sida gabadha oo kale ku sameyneyso gawaarida gawaarida aan macquul aheyn si ay u laado velociraptor. Ama in Jeff Goldblum uu kudhowaad la dagaallamo kuwan markii uu ka cararo, iyaga oo isku garaacaya sida doqomo. Iyo muuqaalka T-Rex ee San Diego… waa su'aal la isweydiiyo sida ugu fiican. Jurassic World waa mid aad iyo aad u xiiso badan, waxay leedahay halyeeyo jilicsan oo xardhan, dagaallada ugu fiican ee u dhexeeya dinosaurs ee taxanaha iyo guud ahaan wax kasta oo filim noocan ah ay tahay inuu lahaado.
Waa Jurassic Park, ma ahan Citizen Kane. Markii aan u tago si aan u arko waxaan rajeynayaa inaan naftayda maaweeliyo oo aan dareemo nostalgic markaan xasuusto tii ugu horreysay, waana taas sida saxda ah waxa ay i siiso. Ha iloobin faahfaahin yar. Markii aan aragnay Jurassic Park dhammaanteen aad baan uga yaraa waxyeellada kumbuyuutarradiina wali way ina qarxinayaan.
Maanta waxaan ka dhawrsan nahay inaan la yaabno iyaga iyo in badan oo bisil oo daawadayaal ah, oo aan si sahal ah u dareemi karin. Jurassic Park wali waa tan ugufiican, laakiin kani wax badan oo xasad ah malahan marka laga reebo maqnaanshaha shucuur badan.
Ku jawaab albertocarlier
Aqrintaada waxaan u maleynayaa in halkii aan ka wada heshiin laheyn, aan aad u raacsanahay. Filimku wuu ka sareeyaa kan seddexaad, shaki la'aan, waa madadaalo, shaki kuma jiro sidoo kale, laakiin wuu ka fog yahay Jurassic Park waana ka fog yahay qayb kasta oo mastar ah.
Sida madadaalada, waa run, laakiin si dhib yar kuma jirto muuqaalo shaki badan leh, sida kuwa ay ku jiraan JP 1 iyo 2 oo ku siiyay goosebumps. Marka laga hadlayo da'da iyo saameynta gaarka ah, mugdiga ayaa ah qodob muhiim ah oo lagu soo koobi karo saameynta iyo Spielberg wuu ogaa, si kastaba ha noqotee daabacaaddan midabbada ayaa laga badiyay, oo ma ahan wax yar oo Alberto ah, tusaale ahaan waxaa aad la ii siiyay garaacista maratoonka filimada aan jeclahay. markaan haysto waqti firaaqo ah
Inta soo hartay, gabi ahaanba waan kugu raacsanahay waxaanan u maleynayaa inaad ku raaci doonto Daniel oo ka socda Cinemanía: Waxay ku dhacdaa dhowr qaniinyo sax ah, laakiin calaamado malahan.
Marka laga hadlayo darajada, ma ahan mid hoose, waa suul kor u kacaya, filim fiican, kaas oo sikastaba aan shaki uga qabo inaan laba jeer arki doono.
Salaan kadib, mahadsanid aqrinta waxaanan rajaynayaa inaad jeceshahay qaybtan cusub, taageerada aqristayaasha iyo kaqeybgalka dooda waa furaha, waxaan u furannahay talooyinka.
Markale waad salaaman tihiin. Waxaan ku raacsanahay wax badan fikradda ah borofisarkeyga Taariikhda Filimka, Miguel Juan Payán iyo lammaanihiisa, oo labaduba dhaleeceeya majaladda «Acción» (https://www.youtube.com/watch?v=NYhbGvCFRPA). Kani waa shineemo iyo dhadhaminta midabada, shaki la'aan. Waxa aan ogahay ayaa ah isagoo ah filim dinosaur ah, Jurassic World wuxuu bixiyaa wax walba oo ay bixiso. Saaxiibaday ayaa filimkii oo dhan ku qaadatay inay si adag gacanta u qabato, marka xaqiiqda ah inaysan xiisad lahayn waa laga doodi karaa. Ma lahan muuqaal u fiican sida labada T-Rex ee Dunida Lumay. Waxyaabahaas waxaa loogu talagalay Master Spielberg oo keliya. Weli, waa filim ka madadaalo badan intaas.
By habka. Haddii aad saxan tahay iyo haddii kale ee ku saabsan batteriga gaariga… cidina kulama doodi karto adiga in baytariyada koofiyadda aragtida habeenkii ay sidoo kale dhawrsan yihiin 20 sano ka dib, shaki la'aan inay tahay cilad soo ifbaxday. Shineemada waan la yaabay markaan arkay sida ay u sameyn karaan qaladka nacasnimada ah.
Kani weli boggan Apple miyaa mise horeyba wax buu uga hadlayaa? Marka ay sidaas tahay, waxaan aaminsanahay in Podemos uusan ku guuleysan doonin doorashooyinka, in Benítez uusan ku qaadan doonin Diisambar magaalada Madrid, in Mission Impossible 5 uu yahay muuqaalka kaliya ee xagaaga, iyo in Apple Watch uu yahay qashin aan faa'iido lahayn oo qiimo ceeb leh leh. .
Marka loo eego aragtidaada tani maahan bog Apple sidoo kale, laakiin sida magaceedaba ka muuqata waxay noqoneysaa bog iPhone ah. Laakiin haddii aad wax kale ka ogaan karto, intaad isla bogga dhex mushaaxayso, taasi way kuu badbaadinaysaa. Ujeedadu waa isku mid sidii had iyo jeer, si fudud loo caawiyo.
Haddii kale waan kugu raacsanahay wax walba marka laga reebo Apple Watch.
Haddii aad wax walba ku raacsan tahay, fadlan nafsaddaada u hur si aad uga warrameyso dulucda websaydhka, si aad u aqriso dib u eegista filimka fadlan, taas waxaan u aadayaa degel u go'an oo aanan u qalmin shaqadaada dad u heellan si xirfad ahaan ah halkan u soo gal si aad iigu wargalisid dunida iphone, maahan ipad, ipod whatch iwm fadlan.
Czech Alaman dijo
Markaad dhinac u dhaafto haddii aan ku raacay iyo haddii kaleba, waxaa jira qodob aan fahamsanahay Miguel aadan fahmin: gawaarida asliga ah ee "Jurassic Park" Jeep ee ay walaalo adeegsadaan inay baxsadaan waa bilaa batari. Waxa ay sameeyaan waxay ugu beddelaan midka wata gaariga "Jurassic World" oo u muuqda inuu kala badh ka jaban yahay koofiyadda dhiigga ku daatay (oo leh calaamadda Jurassic World sidoo kale) irridda laga galo beertii hore.
Jawaab Chesco Alaman
Chesco waad salaaman tahay.
Haddii aan si sax ah u xasuusto, laba wiil oo u dhexeeya 12 iyo 18 sano jir ayaa ku guulaystay inay bilaabaan baabuur taagnaa 20 sano oo boodh uruurayay, wixii markaa ka dambeeya wax waliba waa yara yaab. Waan hubin doonaa goobta haddii aan sax ahayn. Salaan iyo mahadsanid faallooyinka.
Eduardo Alcaino dijo
Batariyada ay wiilashu u adeegsadaan inay ku furaan qalabka jiifka loo yaqaan 'Jeep wrangler', waa batariga UTV ee ay weerareen xayawaan qiroow ah, kani waa cusub oo waxaa wata waardiyaha uu koofiyadu wiilku helay.
Jawaab Eduardo Alcaino
Sababtaas awgeed, aaladda farsamada casriga ahi waa inaysan ka hadlin shineemo ...
Jawaab si ipowa
Carruurta "ugu da'da weyn da'da dugsiga sare iyo kuwa ugu yar yar" sida ay eedadood Claire sheegtay, waxay yiraahdaan "waxay hagaajiyeen gaariga awoowe (ma xasuusto tusaalaha)" waana kaliya in la beddelo batteri, ma haysto dheeraad ah. Aniga ahaan waa wax ka badan kalsoonida maxaa yeelay tan iyo markii aan yaraa waxaan sidoo kale isha ku hayaa noocaas ah dayactirka aasaasiga ah.
Haddaan rabo inaan wax ka akhristo shaleemada, kumaan jiri lahayn balooggan. Waxaad lumisay uun qof raacsan.
Ku jawaab hooyo